Ndinokuyeka Njani Ukukhathazeka Kangaka? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMoore IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
“Xa abahlobo bam beneengxaki, ndisoloko ndikulungele ukubathwalela zona. Kodwa ndithi ndakufika ekhaya—xa ndingekho phakathi kwabantu—ndingene egumbini lam zize zehle iinyembezi.”—UKellie.
“Xa ndikhathazekile, ndiye ndikhethe ukuhlala ndedwa. Naxa ndimenywa ndiba nesizathu sokungayi. Andifuni bayazi indlela endivakalelwa ngayo ekhaya. Bacinga ukuba ndonwabile.”—URick.
Ngaba indlela ovakalelwa ngayo iyafana nekaKellie okanye uRick? Ukuba kunjalo, musa ukukhawuleza ugqibe kwelokuba kukho into ephosakeleyo ngawe. Sonke sikhe sikhathazeke ngamanye amaxesha. Nkqu namadoda namabhinqa aseBhayibhileni ayekhe akhathazeke.—1 Samuweli 1:6-8; INdumiso 35:14.
Ngamanye amaxesha uyasazi isizathu sokuba ukhathazeke kodwa maxa wambi uye ungasazi. UAnna oneminyaka eyi-19 uthi: “Usenokukhathazeka kungekho nto ibuhlungu ikwehleleyo. Enoba ubomi bakho abunazingxaki kubakho amaxesha okukhathazeka ngokwenene. Nangona oku kungavakali kusengqiqweni kodwa kuyenzeka!”
Enoba siyintoni isizathu—enoba sibonakala singekho—yintoni onokuyenza xa ukhathazeke ngokugqithiseleyo? Zama ukwenza oku kulandelayo:
Thetha ngentlungu yakho. Xa wayesentlungwini, uYobhi wathi: “Ndiza kuthetha ngobukrakra bomphefumlo wam!”—Yobhi 10:1.
UKellie uthi: “Xa ndithethe nomnye umntu ndifumana isiqabu kuba utsho ayazi intlungu endikuyo. Unokundinceda ndiyoyise kutsho kuthi qabu!”
Yibhale intlungu okuyo. Ukuba indlela okhathazeke ngayo ichaphazela obujonga ngayo ubomi, zibhale phantsi iingcinga zakho. Ngamanye amaxesha uDavide wayekhe achaze indlela awayeba buhlungu ngayo kwiindumiso zakhe eziphefumlelweyo. (INdumiso 6:6) Ukubhala ngeemvakalelo ezinjalo kunokukunceda ‘ulondoloze ubulumko bobuqili namandla okucinga.’—IMizekeliso 3:21.
UHeather uthi: Ukubhala phantsi kundinceda ndikwazi ukuzikhupha izinto ezindikhathazayo. Xa ukwazi ukuchaza iimvakalelo zakho uze uzame ukuqonda oyena nobangela wendlela ovakalelwa ngayo, unokuziva ubhetele.
Yithandazele. IBhayibhile ithi ukuba uyazithandazela izinto ezikuxhalabisayo, ‘uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuyilinda intliziyo yakho namandla akho engqondo.’—Filipi 4:6, 7.
UEsther uthi: Ndandisicinga ndisincame isizathu sokuba ndikhathazeke. Ndabongoza uYehova ukuba andincede ndiphinde ndonwabe. Yayindikruqula into yokusuka nje ndikhathazeke. Kodwa ekugqibeleni ndahlukana nokuhlala ndidakumbile. Ungaze uwajongele phantsi amandla omthandazo!
Ngokuncedwa nangokwenza okuthile ungawoyisa lo mkhwa wokuhlala ukhathazekile
Nali icebiso: Sebenzisa iNdumiso 139:23, 24 njengomzekelo wendlela onokuthandaza ngayo kuYehova. Phalaza imbilini yakho uze umcele akuncede uyazi eyona nto ikukhathazayo.
Ukongezelela kula macebiso angasentla, unomthombo oluncedo, iLizwi likaThixo iBhayibhile. Ukuzalisa ingqondo yakho ngezinto ezakhayo ozifunde eBhayibhileni kunokukunceda uphucule indlela ocinga ngayo nendlela ozenza ngayo izinto.—INdumiso 1:1-3.
Xa Usoloko Ukhathazekile
URyan uthi: “Ngezinye iintsasa ndiye ndivakalelwe ngathi kubhetele ndingavuki kunokuba ndivukele ilize.” URyan udandathekile yaye asinguye yedwa onale ngxaki. Uphando lubonisa ukuba omnye kwabane kubantu abaselula uyadandatheka ngaphambi kokuba abe mdala.
Unokuzazi njani xa udandathekile? Ezinye iimpawu iba kukutshintsha ngokukhawuleza kwendlela ovakalelwa ngayo nozenza ngayo izinto, ukuzenza ikheswa, ukungabi namdla wokwenza nantoni na, ukutshintsha ngokuphawulekayo kwendlela otya ngayo, ukungalali kakuhle nokuziva ungaxabisekanga okanye ukuzibek’ ityala ngokungeyomfuneko.
Sonke siba nazo ezi mpawu ngamanye amaxesha. Kodwa ukuba kuqengqeleka iiveki unazo, thetha nabazali bakho niye kubona ugqirha. Ugqirha unokukunceda ubone enoba uyagula kusini na.
Ukuba udandathekile, ungabi nazintloni. Ngokufumana unyango, uninzi luye lwachacha—mhlawumbi lwada lwafumana isiqabu olungazange lwasifumana. Enoba ukukhathazeka kwakho kubangelwa kukudandatheka okanye akunjalo, khumbula amazwi athuthuzelayo eNdumiso 34:18 athi: “UYehova usondele kwabo baphuke intliziyo; yaye abo bamoya utyumkileyo uyabasindisa.”